आत्महत्या गर्न उक्साए ज्यान मुद्दा लाग्ने, काठमाडौँमा तीन जना छानबिनमा - २९ माघ २०७५, NepalTimes
आत्महत्या गर्न उक्साए ज्यान मुद्दा लाग्ने, काठमाडौँमा तीन जना छानबिनमा
काठमाडौं : तपाईका काम वा आनीबानीले अरुलाई आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा धकेलेको छैन ? अथवा तपाईका गतिविधिले यस्तो काममा कसैलाई दरुत्साहन (कानुनी वा नैतिक दृष्टिले अवैध कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नु वा उक्साउनु)पो गरेको छ कि ? त्यसो हो भने, सचेत हुनुहोस है ।
किनकि, भदौदेखि लागू भएको फौजदारी अपराध संहितालाई टेकेर प्रहरीले राजधानीमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साह गरेको आरोपमा तीन जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ । यसअघि आत्महत्याका घटनामा प्रहरीले शव पोस्टमार्टम गरी सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारलाई बुझाउँदै आएको थियो ।,यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
कमै मात्र घटनामा शंकास्पद रुपमा हेरेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले अहिले भने आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको परिवारबाट उजुरी आए विस्तृत छानबिन गर्न थालेको छ । आन्तरिक कलह र त्यसबाट उत्पन्न आवेश आत्महत्याको कारण भएको पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।